Zimbabwe gets its first batch of Covid vaccines from China.
Harare :- Zimbabwean Vice President Constantino Chiwenga, together with Chinese Ambassador to Zimbabwe Guo Shaochun, attended the handover ceremony at the airport.
A batch of Covid-19 vaccines donated by China has arrived at Robert Mugabe International Airport in Zimbabwe’s capital here.
The 200,000 doses of Sinopharm vaccines are the first batch that Zimbabwe has received on Monday as it steps up efforts to curb the spread of the Covid-19 pandemic, Xinhua news agency reported.
Zimbabwe has already finalised a vaccine deployment strategy that would see at least 10 million people, or about 60 per cent of the population, being inoculated.